Kalandrie herinandro, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Amin'ireo rindranasa rehetra izay azontsika atao ny mahita azy amin'ny iOS, ny kalandrie sy ny mailaka dia ireo izay manohy mamela zavatra irina ho an'ireo mpampiasa mila zavatra bebe kokoa noho ny fampiharana tsotra izay mampatsiahy antsika rehefa mila mihinana pilina isika inona no ataon'izy ireo ny andian-tantara ankafizinay na jereo hoe firy ny mailaka dokam-barotra voarainay nandritra ny tontolo andro. Ny safidy hafa amin'ny mailaka mailaka ao amin'ny App Store dia afaka mahita nomerao marobe ary koa fampiharana izay mamela antsika hitantana ny fotoana voatondro ao amin'ny kalandrie. Androany isika dia miresaka Week Calendar, fampiharana iray ahafahantsika mitantana ny kalandrie amin'ny fomba hafa na miresaka momba ny maso na ny lafiny azo ampiharina, izay ahitantsika safidy marobe.
Week Calendar dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Endri-javatra Kalandrie Week
Fahafahana mampifandray data amin'ny fotoana voatondro
Lisitra ankapobeny ahafahanao mijery ny fotoana voatondro sy hetsika rehetra
Ny fandaminana indray ny fotoana voatondro sy ny hetsika dia mora toy ny misintona sy milatsaka amin'ny andro irina.
Topimaso amin'ny kalandrie isan'andro, herinandro, volana ary taona
Fandidiana batch mba hitsitsiana fotoana.
Sary kisary isan-karazany amin'ny hetsika samihafa
Mifanaraka amin'ny Apple & Google Maps, Citymapper, Garmin, Moovit, Here, iGo, Maps.me, Tom Tom, Navigon, Sygic, TransitApp, Waze, Yandex
Manampia hetsika haingana miaraka amin'ny endri-javatra 3D Touch.
Mety hivoatra mba hanakaiky kokoa ny andro miaraka amin'ny fotoana voatondro sy hetsika.
Fahafahana mampifandray ireo fifandraisana amin'ireo hetsika izay efa nomaninay.
Mifanaraka amin'ny fomba fijery an-kalamanjana.
Fitsipika famerenana mandroso
Widget ho an'ny foibe fampandrenesana.
Fampisehoana azo namboarina
Fomba fanamboarana tanteraka ny hetsika
Fahaizana manafina ny faran'ny herinandro rehefa tsy misy fanendrena / andro fiasana / rehefa tsy avadika
Week Calendar dia manana fividianana fampiharana marobe izay ahafahantsika manampy fialantsasatra sy kalandrie hafa (lany andro ankehitriny) amin'ny fandaharam-potoanan'ny baolina kitra sy ny lalao basikety. Fa hahazoana izany vaovao izany tsy mila mividy azy, satria raha mizaha kely isika dia afaka mahita azy ireo amin'ny Internet ary manampy azy ireo mivantana amin'ny iPhone, iPad na Mac antsika amin'ny kalandrie vaovao.
WeekCalendar - Kalandrie Cloudmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Kalandrie herinandro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Lalao sy fampiharana 20 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (5 Janoary)
Ity fampiharana ity dia ahafahantsika mahita ny AirPods raha toa ka very azy ireo isika